Vaovao momba ny kaominaly - Aiza no misy feon'ny mpamaky
Aoka ianao ho mpamatsy vola
Aza misoratra anarana
Vaovao momba ny kaominaly
IZAY REHETRA DIA TOKONY AZO ATAO
Alika ny Dow - 2019
Feno vola miditra
Ny hosoka amin'ny mpanjifa Amazon
Fanavotana fanaintainana - fanosotra amin'ny hoditra, menaka ary famafazana
Fikarohana CN Market
Torohevitra momba ny fandefasana lahatsoratra
Ny CN dia nanampy anay hampitombo ny vola azon'ny 50%
Rehefa avy nanandrana serivisy PR maromaro aho dia nahita CN
Mandoa vola aloa hitatitra ny vaovao!
Araho ny Artilces - Avoahy
Egypt dia namarana ny fifanarahana tohodrano Renaissance, Setures fepetra
George Mtimba Janoary 18, 2020 Janoary 18, 2020 George Mtimba
I Egypt dia namantatra ireo hevi-dehibe sy fepetra izay tsy maintsy ampidirina amin'ny fifanarahana farany ho an'ny toby Renaissance etiopiana lehibe, izay hotanterahina any amin'ireo fivoriana any Washington amin'ny 28 Janoary sy ny 29 janoary lasa teo. Rano sabotsy, hijery ny valin'ny Washington ...
Amerika Latina Biostimulants Famonoana Paydirt
Nikhil khadilkar Janoary 18, 2020 Janoary 18, 2020 Nikhil khadilkar
Ny biostimulant amin'ny fambolena dia singa biolojika na fitrandrahana ampiasaina ho famatsiana zavamaniry miaraka amin'ny tanjona hanatsarana ny fahombiazana ara-tsakafo, fandeferana amin'ny fanalan-jaza ary ny antony hafa, na inona na inona momba ny otrikaina mahavelona azy. Ankoatr'izay, ny biostimulant amin'ny zavamaniry dia manondro ihany koa ny vokatra ara-barotra misy fifangaroan'ireny zavatra ireny sy / na microorganism.
Famaranana ny Editor David Wexelman Janoary 19, 2020 Janoary 18, 2020 David Wexelman
Progressive liberal influences are affecting Orthodox Muslims, Christians, Hindus and Jews throughout the world. In the news is an article regarding the Catholic church Pope Benedict warns against relaxing priestly- celibacy rules. Pope Benedict resigned from his position and Pope Francis is his successor. Many people guess the reason for his resignation which was very ...
SD-WAN: Fiarovana, fanandramana fampiasa ary fitomboan'ny tsenan'ny famoronana fiara
Famaranana ny Editor Jack Suri Janoary 18, 2020 Janoary 18, 2020 Jack Suri
SD-WAN amin'ny fototr'izy ireo dia manampy ny orinasam-pifandraisana hahomby amin'ny alàlan'ny paikady sy ny tetikady IT, ny politikan'ny fampiharana ary ny fanamafisana WAN. Amin'ny teny hafa, manome alalana ny WAN hanome ny traikefa fampiharana (fahatokisana, ny fahazoana sy ny fampisehoana) ary ny fiarovana ny fampiharana takian'ny mpampiasa orinasa, ary ny fahatsorana fampiasa izay tian'ny IT sy ny tambajotra amin'izao fotoana izao ...
Ny fikarohana sy ny tsena
Miakatra ny tsena Sourdough
Ny tsenan'ny serivisy Bot dia miteny ho azy
Mitombo haingana ny tsenan'ny fivoarana biosensors
Ny rindrambaiko Geospatial Analytics mitady ny làlany
Ny tsenan'ny ranomasina dia mitombo
Ny tsenam-bokatra angovo mamatsy angovo (DEG)
Tsena Chocolate Organic manana Hoavy Mamy
Ny lozisialy fitsinjarana ny tsenan-tsoratry ny mpitsidika dia tsara
Ny tsenan'ny foibe foibe ho an'ny foiben'ny Mega data
$ 1 tokana / tsindrio
Alefaso eto ny adinao
Miseho ny olona 162,000 ny Volkano Taal
Ny isan'ny nifindra noho ny fipoahan'ny volkano Taal any avaratr'i Filipina dia tafakatra hatramin'ny 162,000 satria hoy ny manampahaizana nilaza fa ny fivoahan'ny setroka mihetsika ary ny horohoro dia manondro fitomboana. Manohy ny… ny mpahay siansa momba ny fanjakana…
Nifandona tamin'ireo mpanao fihetsiketsehana ny tafika mpiambina libaney, am-polony naratra
Ny Lakroa Mena Libaney dia nanambara ny ratra tamin'ny mpanao fihetsiketsehana 75, vokatry ny fifandonana teo amin'ny fiarovana sy ny mpanao fihetsiketsehana any Beirut, tao amin'ny faritra manodidina ny Parlemanta ao afovoany Beirut. Mpanao fihetsiketsehana dia nanipy afo sy vato…
Boeing dia mahita kalifona rindrambaiko vaovao amin'ny MA737 XNUMX
Nilaza i Boeing fa nanome fampahalalana amin'ny United States Aviation Authority (FAA) momba ny olana lozisialy amin'ny 737 Max. Araka ny notaterin'ny filazam-baovao AP, nisy olona nahalala ny zava-misy nilaza fa…
Nandrisika Hiankina amin'ny fihaonambe any Berlin i Greece
Nilaza ny minisitry ny raharaham-bahiny grika Nikos Dendias androany fa, taorian'ny fihaonany tamin'ny mpitarika ny Tafika Libiana, Khalifa Haftar, Athens dia manantena ireo firenena eoropeana handà ny fahatsiarovana roa izay nosoniavin'i Torkia niaraka tamin'ny…
Antsoina avy amin'ny ONU sy vondrona eoropeana hampiato ny hetsika miaramila ao Syria
Ny zoma teo, ny Kaomisera ambony an'ny Firenena Mikambana momba ny zon'olombelona, ​​Michelle Bachelet, dia niantso ny hanajanonana avy hatrany ny famonoana olona tao Idlib, ary nilaza fa ny ady farany farany tany Syria dia “tsy nahomby intsony ny fiarovana ny sivily.” Tonga izany…
Notsaboina tany Nizeria ireo mpiasa mpamonjy voina
Navotsotra ny mpiasa fanampiana telo sy ny sivily hafa izay nitazomina vondrona iray mitam-piadiana, hoy ny tompon'andraikitra iray ao amin'ny Firenena Mikambana. Nentina nanao takalon'aina tany avaratra avaratra izy ireo nanomboka tamin'ny faran'ny volana Desambra.…
Pakistan: Tafika Taliban vonona hampihena ny herisetra any Afghanistan
Araka ny filazan'ny minisitry ny Raharaham-bahiny Pakistaney, ny mpikomy Afghaniban dia vonona hampihena ny herisetra any Afghanistan. Shah Mehmood Qureshi dia niantso ny faneken'ny Taliban ny fampiatoana ny hetsika mahery setra ho dingana mahomby amin'ny fandriampahalemana ao amin'ny…
Minisitry ny raharaham-bahiny kanadiana: Miandry ny valiny marina ataon'i Iran ny tany
Ny Minisitry ny Raharaham-bahiny Kanadiana, Francois-Philippe Champagne dia nampanantena fa “hoterena” i Iran hamaly ny “antony marina” nahatonga ny fiaramanidina Okrainiana. “Miandry ny valiny izao tontolo izao ary tsy ho tony…
ONU: Ankizy syriana dimy tapitrisa no tsy nesorina
Nisy tatitra vaovao nataon'ny Vaomieran'ny Fikambanana Mikambana misahana ny fanadihadiana any Syria mampiseho fa ireo vondrona mpitolona mitam-piadiana any Syria dia manararaotra ankizy be dia be. Manodidina ny 1.5 tapitrisa ny zaza efa nafindra tany Syria, ary…
Nanomboka tao amin'ny Senat ny Fitsarana an'i Impeachment Trump
Ny fitsarana ny fampandrenesana ny filoham-pirenena amerikana Donald J. Trump dia nanomboka tao amin'ny Senat tamin'ny famakiana tamim-pahatoniana ny fiampangana ny fanararaotana ny fahefana sy ny fanakanana ny Kongresy. Nanokatra ny filoha fahatelo fahatelo i Senate Sergeant ao amin'ny Arms Michael Stenger.
Libanona: am-polony no tazonina taorian'ireo nitifitra ireo mpanao fihetsiketsehana
Ny fihetsiketsehana libaney am-polony no navotsotry ny mpitandro ny filaminana taorian'ny roa alina fihetsiketsehana tezitra tao Beirut. Ny sasany tamin'izy ireo dia nikendry banky, ary nosamborina, hoy ny mpisolovava niaraka taminy tamin'ny antontan-taratasiny. Komitin'ny mpisolovava…
Putin Nominates Lehiben'ny serivisaky ny hetra hahomby amin'ny Medvedev
Ny filoham-pirenena Rosiana Vladimir Putin dia nanolo-kevitra fa ny lehiben'ny Sampandraharahan'ny hetra federaly, Mikhail Mishustin dia tokony handray ny praiminisitra amin'ny alarobia. Ny Kremlin dia nanao fanambarana taorian'ny fametraham-pialana tampoka ny Rosiana…
Ny Minisitry ny Raharaham-bahiny Alemana dia nankany Libya hihaona amin'i Khalifa Haftar
Nankany Libya androany ny minisitry ny raharaham-bahiny alemana Heiko Maas mba hanao lahateny amin'i Field Marshal Khalifa Haftar, komandin'ny tafika nasionaly Libiana. Ny fitsidihan'i Maas dia vita telo andro monja alohan'ny fihaonana an-tampony Libiana efa nomanina tao…
Eto i Czar Putin - Fiovana ho an'ny lalàm-panorenana Rosiana sy demaokrasia tsara
Famaranana ny EditorChristina Kitova
Tamin'ny 15 Janoary 2020, Vladimir Putin dia nanao kabary lehibe izay hanova ny fitak'i Rosia mandrakizay. Mazava fa i Putin dia hanaraka ny dian'ny filoha sinoa Xi ho tsara be…
Sina sy Etazonia famantarana famantarana voalohany ny fifanarahana ara-barotra
Ny filoha amerikana Donald Trump sy ny praiminisitra sinoa Liu dia nanao sonia ny "dingana voalohany" tamin'ny fifanarahana ara-barotra tamin'i Shina tamin'ny alarobia teo tao amin'ny Trano Fotsy izy. I Trump dia namariparitra ny fanasoniavana ilay fifanarahana ho “fotoana fohy…
Fikarohana famandrihana: Sestrins afaka mameno ny fanatanjahan-tena ary manome valiny
Nisy fanadihadiana vaovao navoaka izay milaza fa ny Sestrins dia mpanelanelana amin'ny fikajiana ny tombontsoa azo ampiharina. Azo atao ny mankafy ny tombontsoan'ny fanatanjahan-tena nefa tsy manao izany. Na izany aza, zava-dehibe ho an'ny…
Haftar dia mandà Ceasefire, mpifanolo-bodirindrina mifantoka, mpiara-miasa
Amin'ny dingana vaovao, ny Komandin'ny Tafiky ny Tafika Libiana, Khalifa Haftar, dia nanapa-kevitra ny hanahemotra ny sonia fifanarahana fampitsaharana ady, ka nandao an'i Rosia sy ny delegasiona azy. Russia nanao lahateny iraisampirenena fiaraha-miasa amin'ny praiminisitra…
Cops Booker Drops avy amin'ny hazakazaka filoham-pirenena
Ny senatera amerikana Cory Booker (D-NJ) dia nanambara ny alatsinainy fa nilaozany ny faniriany ho kandida amin'ny Antoko demokratika hiatrehana an'i Donald Trump amin'ny fifidianana filoham-pirenena amerikana hotanterahina ny volana novambra amin'ity taona ity. Tamin'ny alàlan'ny fanambarana iray, ny…
Manomboka ny fanafihan'ny tafika fiarovana Alemanina amin'ny Islamista
Nanangana fanafihana sy fanentanana fikarohana tany amin'ny fanjakana maro ny manampahefana Alemanina noho ny ahiahy ny fiomanana amin'ny “heloka bevava izay miteraka fandrahonana ho an'ny fandriam-pahalemana.” Ao anatin'ny tontolon'ny politika mavitrika, ny tsimokarom-pahefana isan-tsokajiny…
Elizabeth II mamaly ny fanapahan-kevitr'i Harry & Meghan handao ny monarkia
Ny Mpanjakavavy Elizabeth II dia nanome ny tso-dranony tamin'ny fanapahan-kevitry ny Printsy Harry sy ny vadiny, ny Duchess of Sussex, Meghan Markle, hiala amin'ny andraikiny amin'ny maha-solontenan'ny monarkiera azy ny…
Mpianatra Etiopiana miisa XNUMX Navotsotra tamin'ny fahitana azy
Mpianatra Etiopiana 21 farafahakeliny no navotsotra tamin'ny fahababoana taorian'ny nanesorana azy tamin'ny fiandohan'ny volana Desambra, hoy ny governemanta. Fa misy enina hafa kosa dia mbola ao anatin'ny fahababoana. Ireo mpianatra ireo dia voalaza fa avy amin'ny faritr'i Amhara. The ...
Fipoahana volkano Taal any Filipina
Nisy volkano iray tany Philippines nanomboka nanomboka lava be satria nampitandrina ny manampahefana fa ny fipoahana mampidi-doza dia mety “ao anatin'ny ora vitsivitsy sy andro vitsivitsy.” Tany am-piandohan'ny alatsinainy maraina, dia nisy onja lava be teo nihena…
Fihaonambe Iraisam-pirenena ho an'ny Hetsika Eran-tany amin'ny Abu Dhabi Mpampirantiana 800
Ny fivoriana tamin'ny 2020 an'ny World Energy Energy Summit androany dia nosokafana tao amin'ny Foiben'ny Fampirantiana Abu Dhabi, tao anatin'ny fandraisana anjaran'ireo mpanotrona an-jatony sy ny fisian'ny olona an'aliny maro manerana ny…
Misokatra amin'ny fifampiraharahana amin'i Iran i Trump
Ny filoham-pirenena amerikana Donald Trump dia nilaza ny alahady alina hoe nisokatra izy hifampiraharaha fifanarahana niokleary vaovao amin'i Iran, fa ny dingana voalohany dia miankina amin'ny fitondran'ny Iraniana. Ny toe-javatra tokana nataony, araka ny nohazavainy, dia ny…
Merkel sy Putin Antso ho an'ny vahaolana hanoherana ny any Libya
Ny Chancellor Alemanina Angela Merkel sy ny mpiara-miasa aminy Rosiana Vladimir Putin dia niantso vahaolana ho an'ny krizy any Libya Sabotsy. Taorian'ny fihaonana tany Moskoa, izay miresaka ihany koa ny fihenan'ny krizy any Moyen Orient…
Fanehoan-kevitry ny Lehiben'ny Rabi dia mampiseho ny fifanolanana tsy ara-pivavahana sy ara-pivavahana any Isiraely
Miatrika fifanenjanana ivelany sy ivelany i Israely. Ny fifanolanana ivelany dia ny fihaonan'ny mpifanolobodirindrina aminy, Libanona, Syria ary Iran. Manampy ny Isiraely amin'ny fiarovan-tena amin'ny fireneny i Amerika. Tsy hanaiky ny fanatrehana ...
Nanomboka ny fandaharan'asa fanavaozana "New space" Space
Ny Emirates Space Agency dia nanambara ny fiaraha-miasa amin'ny Krypto Labs, ny Ivotoerana Global Innovation Global Abu Dhabi, hamoaka fandaharana fanavaozana "sehatra vaovao" manerana ny firenena. Ny tanjona dia ny hampiroborobo ny fitomboan'ny orinasa miasa any…
Ny oniversite HR amin'ny Internet manampy amin'ny fanaovana ny tsara kokoa ny asa ataonao
Ny fianarana mitohy dia ilaina amin'ny fikatsahana fotoana vaovao sy hampiakarana ny tohanan'ny asa. Zava-dehibe ny mianatra fahaiza-manao vaovao, tohizo hatrany amin'ny fironana farany, mampivoatra ny fahaiza-mitarika, sy ny maro hafa. Fanohizana ny fampianarana ho an'ny…
DHX Media / Fatorana an-tsaha, Fohy lava, famokarana avo, fampiasam-bola fidiram-bola azo antoka, mitentina 9.5% YTM
Famaranana ny EditorDurig's FX2
This week, Durig’s weekly bond review takes another look at a Canadian company that focuses on children’s content and brands. You may not have heard of WildBrain (formerly DHX Media), but you may know some…
Greshun De Bouse amin'ireo mpanohitra: 'Azafady, ajanony ny famoretana amiko'
Ny mpitarika izao tontolo izao malalantsika Greshun De Bouse dia manana fiainana sahirana sy mamokatra! Tianay izy amin'izany! Ao anatin'ny toe-javatra mahazatra, hita fa mikaroka, mandeha mivory hihaona amin'ireo olo-manan-kaja / naoty izy, amin'ny ankapobeny dia mazàna…
Amboary ny marikao amin'ny media sosialy
Famaranana ny EditorKevin Gardner
Ny haino aman-jery sosialy dia mihoatra ny tabilao be ho an'ny mpikatroka ara-politika, ny tanora zatovo, ary ny reny mijanona ao an-trano. Fa kosa, sehatra media mahery vaika ny haino aman-jery sosialy izay mahatonga azy ho mora be ho an'ny marika sy ny mpanjifa…
Torolàlana fohy momba ny asa ilaina ary ny kajy
Ny renivohitra miasa dia ny taham-bolan'ny orinasa amin'izao fotoana izao noho ny andraikitra ankehitriny. Ampiasaina betsaka ho toy ny mariky ny renivola fitambaran'io fikambanana io, ary koa ny vola fohifohy fohy ...
Rheinmetall - Tompondakan'ny Alemanina miatrika fikorontanana amin'ny tontolon'ny fiarovana
Famaranana ny Editornatalia Freyton
Rheinmetall, mpandray anjara ambony amin'ny fanondranana fitaovam-piadiana aorian'ny asa ady any Alemana dia tsy toerana tsara indrindra hanamboarana sy fivarotana basy, andao hiatrika azy. Na eo aza ny tsena an-trano sarotra, Rheinmetall dia nahomby tamin'ny fivoaran'ny, tamin'ny alàlan'ny asa miady mahery sy mahomby…
Taorian'ny Kandida Lubbock Radio Host Slams Transgender Kandidà, Mpitoriteny any an-toerana no tafiditra amin'ny ady
Taloha androany dia nisy ny fampisehoana fampisehoana radio Lubbock transphobic nanapoaka ny fampielezan-kevitro fa tsy ny politika, fa ny maha-lahy ahy. Saingy vao nanomboka ny andro mahatsiravina izany, ora vitsy taorian'izay…
Greshun De Bouse: Fitiavana na dia teo aza ireo mpanohitra
Inona koa no azo ambara momba ny Greshun De Bouse? Ny hahafantatra azy na ny sendra azy aza dia ny tia azy. Ny olona tsara fanahy sy malefaka dia matetika nojeren'ny vahiny mijery azy ho tsy misy dikany loatra amin'ny…
Alternative mpampiasa Investor's iray
Famaranana ny EditorFamerenana amin'ny laoniny
Fifandraisana hita amina fahatokisana ho an'ny mpampiasa vola maneran-tany Ny mpanolotsaina ara-bola voarakitra toa an-dry Durig dia tsiambaratelo ary manana adidy mba hiasa mandrakariva amin'ny tombontsoan'ny mpanjifany. Noho io adidy io,…
Fomba fanampian'ny fampianarana amin'ny fampiofanana ho an'ny mpiasa
Famaranana ny EditorNetasha Adams
Amin'izao vanim-potoana sy vanim-potoana fifaninanana kapitalista izao, tsy azonao atao ny tsy miraharaha zavatra kely izay mamaritra ny fahombiazanao sy ny faharetan'ny orinasanao. Ny fiofanana arak'asa ho an'ny mpiasan'ny orinasa dia iray amin'ireo filàna tsy mahafaty…
Radio Host Transphobic avy amin'ny Lubbock manafika Kandida Transgender
Eto amin'ity PodCast ity, Atoa Pratt Blatanny dia mampiseho ny toetran'ny homophobic sy transphobic, amin'ny teniny izay natao mazava fa mandratra. Eny, naniry ny hiatrika io olana io aho, ary hanome anao ny anjarako rehetra ...
Hevi-dehibe 7 momba ny fandresena
Famaranana ny EditorStella Hawar
Betsaka ny olona no namina tamin'ny angano sy ny diso ny heviny momba ny fiterahana. Satria sarotra ny mamantatra hoe inona no marina na diso, zava-dehibe ny hananan'ny tsirairay fahalalana bebe kokoa momba…
Fanontaniana ho an'ny demaokratista sosialista: "Maninona ianao no te handringana ny firenentsika?"
Hatramin'ny andro tany am-piandohan'ny fitantanana Obama dia nifindra ny Demokraty (ankavia) hametraka demokrasia sosialisma any Etazonia. Andao hiatrika izany, nanao satroka marobe i Obama. Iran dia firenena sosialista…
Fampandrenesana loza! Yandex Rosiana Fikarohana Rosiana atolotra ho an'ny Fitaovana Android - Loza mampidi-doza ho an'ny Tandrefana sy NATO avy any Kremlin?
Tsiahivina fa manomboka ny 1 martsa 2020, ny finday Android vaovao any amin'ny sehatra eoropeanina eropeana dia hanana safidy ny mampiasa ny milina fikarohana Yandex Rosiana. Yandex Search dia fitadiavana tranonkala…
Manapa-kevitra amin'ny Andron'ny mariazinao amin'ny taom-baovao 2020, miaraka amin'ny fidinana ny toerana misy anao amin'ny vidiny mora vidy ao Oregon
Efa ao anatin'ny taonan'ny 2020 isika izao izay misy lanjany amin'ny daty hianjera amin'ny asabotsy mandritra ny taona. Mora ny mitadidy amin'ny taona 2020 tahaka ny taona nahitanao…
Fifandrifian'i Libya - Inona ny Agenda Tiorka sy Rosiana?
I Russia dia hampiantrano an'i Fayez al-Serraj sy Khalifa Haftar any Moskoa amin'ny fikasana hahatratra ny fandriampahalemana any Libya. Araka ny vaovao Rosiana dia efa any Rosia i Haftar. Mevlüt Çavuşoğlu, izay mpanao politika Tiorka ary…
Manampy ireo mpiasa, ny orinasan-draharaha miaraka amin'ny ivon-ketra ara-toekarena vaovao Gig Gigy ny IRS
Famaranana ny EditorFilomena Mealy
Ny serivisy fidiram-bolan'ny atiny dia nanangana toeram-piraisan-ketra Gig Economy Tax vaovao ao amin'ny IRS.gov mba hanampiana ny olona amin'ity faritra mitombo ity amin'ny fampahafantarana vaovao misimisy kokoa. "Ny IRS dia namolavola ity an-tserasera ...
Top 7 Deodorant Fangaro amin'ny fisorohana
Araka ny efa antenaina dia mitambatra samy hafa bizina ny deodorant tsirairay. Na izany aza, ny sasany amin'ireo akora ireo dia tsy tsara amin'ny fahasalamanao satria mahavita miteraka olana ara-pahasalamana. Noho izany, alohan'ny hisafidianana…
Firenena manerantany amin'ny Espaniola izao dia mahazo miditra eran'izao tontolo izao amin'ny fanomezana goavambe malalaka maneran-tany
Ny Espaniola no fiteny fahefatra lehibe indrindra eto amin'izao tontolo izao aorian'ny anglisy, shinoa ary Hindi. Miisa 23 ny distrika izay manana ny teny Espaniôla ho fiteny ofisialy ary miparitaka manerana ny kaontinanta efatra ireo firenena ireo. Ankehitriny…
Macrocosm sy Microcosm - Finoana sy Fivavahana
Ny demokrasia dia vokatry ny enina arivo taona amin'ny fampandrosoana ny sivilizasiona. Ny demokrasia no makrôzôma momba ny tantaram-piainana sy ny siviliziona nanomboka tamin'ny andro voalohany nahariana ka hatramin'izao. Ny mikrôzôby amin'ny…
Fitaovana 5 tsara indrindra amin'ny 2020 izay mitondra fampiononana amin'ny biraonao
Famaranana ny EditorGlenn Matthews
Ny alatsinainy sy talata dia midika ho fanombohana herinandro fiasana vaovao! Ny eritreritra fotsiny no mahatonga ny maro be hihaona mandritra ny faran'ny herinandro rehefa mieritreritra ny hiomanana amin'ny fikosoham-bary maraina izahay.
Azo alaina izao ny fisie maimaim-poana IRS - Mandoa hetra amin'ny Internet maimaim-poana
Ny ankamaroan'ny mpandoa hetra dia mahazo fiantombohana amin'ny fiverenan'ny hetra federaly amin'ny alalàn'ny IRS Free File - manasongadina ireo mpamatsy hetra amin'ny Internet-marika - nosokafana tamin'ny zoma 10 Janoary 2020 tao amin'ny IRS.gov/FreeFile momba ny hetra 2020…
Putin's Sovietika Russia Russia - Haavo Propaganda vaovao - Sarimihetsika misy sary nataon'i Putin ho toy ny Czar - Inona no misy?
Vao haingana, ny horonantsary tantara foronina momba an'i Putin no vita. Ny teti-bola ho an'ny sarimihetsika dia 800 tapitrisa Rubles (13.1 tapitrisa dolara) manana lohahevitra ara-tantara ny sarimihetsika ary i Vladimir Putin dia naseho ho Czar Nikolas I…
Zoroka mirehitra sy faribolana ho an'ny fikarakarana zazakely
Famaranana ny EditorNadia Hemmati
Ny tebiteby amin'ny ankizy matetika dia avy amin'ny fifandraisan'izy ireo voalohany amin'ny tontolo iainana. Ny fampidirana ny sain-jaza ho ao anaty tontolo dia afaka mampitombo ny fiononana ny zaza ary mety hampihena ny tebiteby. Noho izany, mampiasa endrika mahazatra ho an'ny…
Etazonia, Iran ary Hoavin'ny Geopolitikaly ny Moyen Orient
Nanomboka tamin'ny taona 2020 ny olona maty tsy manan-tsiny. Nitifitra fiaramanidina Boeing iray ampiasain'ny fiaramanidina Okrainiana i Iran, ka namoy ny ainy. Ny fanafihana dia nitranga taorian'ny nahavitan'i Etazonia tamim-pahombiazana (tamin'ny alàlan'ny drone ...
Lohahevitra mifanipaka nalaina avy tao amin'ny Top Chinese Journal
Famaranana ny EditorCorey Barro
Tamin'ny 2013, lahatsoratra roa amin'ny lafiny akademika mitondra ny lohateny hoe "Theory and Pract of Ecological Economics Fractization Framework" dia navoaka tao amin'ny Journal of Glaciology and Geocryology, gazety an-tserasera ambony momba ny ranomandry, ranomandry, permafrost ary faribolana. The ...
Navoaka ao amin'ny 100 World Languages ​​ny CN
Araho eto ny Aricles ary alefaso manerantany
Karohy ny vaovaom-pifandraisana
CN Herinandro Mamaky 1 Herinandro
Fikarohana fizika vaovao momba ny fizika nataon'ny mpikaroka Rosiana - CERN Large Hadron Collider
Iran Niaiky ny "tsy nahy" mitifitra arahin'i Ukraine
Sharjah mandray ny orinasa sy marika amin'ny vy vita amin'ny 2020
Ny tsenan'i UAV Payload sy ny subsistem amin'ny fanaterana ny entana
Market Geospatial Analytics Market
Ny fanehoan-kevitry ny Lehiben'ny Rabi dia mampiseho ny fifanolanana tsy ara-pivavahana sy ara-pinoana any Isiraely
Araho ny CN:
Microjob - Toeram-pivarotana ambany indrindra eo amin'ny Global Gigs
Famoahana an-tserasera / famoahana an'arivony 3
Global Press Release Writing / Marketing
Serivisy fanabeazana amin'ny teny anglisy AAA AAA (45 dolara isaky ny 1,000 XNUMX teny)
Amporisiho ny asanao - Lahatsoratra 3 amin'ny fiteny 100 ho an'ny $ 149
3 (21) Mpanolotsaina momba ny fampiasam-bola - Serivisy Fiduciary - Soavan'ny Flat amin'ny $ 50 / Ora an'ny consulting
Lahatsoratra tsara sy voasoratra tsara izay mampiroborobo ny orinasanao
Serivisy Fiduciary matihanina - $ 100 mandritra ny ora 2
Avoahy ny famoahana ny gazety 3 mandritra ny herinandro 2 mandritra ny $ 21
Avoahy ny famoahana gazety 2 ho an'ny $ 16 - Fifanarahana PR tsara amin'ny Internet?
Avoahy ny famoahana an-gazety anao ao amin'ny Google & Communal News ho an'ny 11 $ $ fotsiny!
Mila misoratra anarana ianao ho toy ny mpandray anjara CN na Mpanoratra ho an'ny Comment
MW on Rheinmetall - Tompondakan'ny Alemanina miatrika fikorontanana amin'ny tontolon'ny fiarovana
Rocco Lewis on Teknolojia vaovao mitondra fiara tsena nomerika
Gordon Fiddes on Stampede ao amin'ny Soleimani Funeral Kills 50, maratra 212
MW on Zava-misy momba ny famonjena io: ny fanjanahan'ny Mars sy ny fahatsapana ho tonga farany
Luke Cage on Miaramila milisy be dia be mandeha amin'ny Capitol Virginia - Governora hanomboka ny fandroahana basy avy amin'ny tompon'ny basy
Christina Kitova on Fampitandremana! Mamoaka ny vokatra avy any Sina ny Amazon fa tsy mety hifanaraka amin'ny fitsipika FDA
MW on Fampitandremana! Mamoaka ny vokatra avy any Sina ny Amazon fa tsy mety hifanaraka amin'ny fitsipika FDA
MW on Afaka mamarana ny lozam-pifamoivoizana sy ny fivorian'ny arabe ny fanafoanana ny teknolojia Edge sy ny fiaraha-miasa amin'ny manam-pahaizana?
Pick ny CN Editor
CN Momba anay
Lahatsoratra an'ny CN Sumit - Avoahy
Market Market Global FGG Freelance
CN Be mpamatsy vola
FGG fisoratana anarana ho Freelance Gig Contributor
Lahatsoratra an'ny FGG Freelance ho an'ireo Manomboka
FGG Fandikan-teny Rosiana Freelance Gigs News
FGG Fandikan-teny frantsay Freelance Gigs News
FGG Shinoa Translation Freelance Gigs News
Ny fidiram-bolan'ny CN
CN Pain Relief - fanosotra amin'ny crème, Gel ary Spray